Wararka - ARICO | NAFKA SIDA caaddiga ah
ARICO | NAFKA SIDA caaddiga ah
Naqshadda Kursiga Xafiiska
Inta badan naqshadeeyayaasha waxay diiradda saaraan muuqaalka ama qaybaha, kuwaas oo loogu talagalay alaabta fikradooda. ka dhigaysa la'aanta ku-oolnimada iyo horumarinta shaqada iyada oo aan tixgelin guud la'aanteed. Waxaa xitaa la hirgelin karaa isticmaalka waayo-aragnimada.
Qaadashada fikradda booska saddex-geesoodka ah, isku-darka dadka iyo deegaanka si ay u fekeraan oo ay u sahamiyaan waayo-aragnimada ugu raaxada badan ee ku noqoshada jidhka bini'aadamka waa fekerka horumarsan iyo hal-abuurka leh ee raadinta is-waafajinta qumman ee kursiga xafiiska casriga ah ee naqshadeeyaha warshadaha.
FOOMKA ayaa raacaya shaqada
Muuqaal wanaagsan, shaqaynaysa & xasilloon, habka waxaa si wadajir ah u sameeyay GOODTONE iyo Jarmalka qayb ka mid ah alaab-qeybiyaha BOCK.
Cududda aluminium aluminium
Gacmaha birta ah ee go'an ee qaab dhismeedka qaansada, ayaa kordhay xoojinta taageerada farsamada, qurux badan, xoog leh iyo sidoo kale xasilloon.
AESTHETICS DHAQAN AH
Habka naqshadeynta ARICO, welwelka ugu mudan waa iska hor imaadka naqshadeynta. Waxay u baahan tahay khadadka fudud oo nadiif ah iyo sidoo kale hawlo badan. Naqshadeeyuhu wuxuu fududeeyaa nidaamka guga si loo yareeyo xajmiga habka.
Doorashooyin Kala Duwan
Kursiga daba-wareegga ah ee dhabarka sare iyo midka dhexe, oo leh qaab-dhismeedkooda taageerada birta ah ee dhalaalaya
iyo midab qalin ah oo dhalaalaya oo u dhigma maqaar dhab ah, maqaar fiber Micro ah ama dhar.
5 kooxood oo maqaar dhab ah/maqaar microfiber ah
4 Kooxood Fabric
Qaybaha birta sifaynta
Qaybaha birta dhalaalaysa
Profile Naqshadeeye, Peter Horn
Horn Design and Engineering waa shirkad caan ah oo ka shaqeysa naqshadeynta warshadaha iyo horumarinta wax soo saarka, hesha abaal-marinno aan dhammaad lahayn sida Red Dot Design Award.IF Design Award iyo Abaalmarinta Naqshadeynta Jarmalka. Iyada oo ku saleysan Dresden Germany.Horn Design and Engineering ayaa mar naqshadeysay mid ka mid ah iibka ugu wanaagsan kursi xafiis oo loogu talagalay ganacsiyada kursiyada xafiiska weyn.